Mpanamory mpisolo toerana - vahaolana goavana amin'ny olana maika
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Mpanamory mpisolo toerana - vahaolana goavana amin'ny olana maika
Tamin'ny taona 2016 Lufthansa dia nitatitra fa ny fitokonan'ny mpanamory fiaramanidina iray maharitra enina andro dia mitentina 100 tapitrisa € (118 tapitrisa dolara). Ity no fotoana faha-15 tao anatin'ny roa taona rehefa nivoaka tao anaty ady lava notarihin'ny sendika teo an-toerana ny mpanamory fiaramanidina an'ny vondrona Lufthansa. Ary ireo mpitatitra lova dia lavitra ireo irery mijaly amin'ilay antsoin'ny manam-pahaizana bebe kokoa hoe "blackmail an'ny sendika". Ny fanafoanana ny sidina farany teo noho ny olana momba ny lisitry ny mpanamory fiaramanidina voalaza fa hampidina ra amin'ny fomba ofisialy ny goavambe Ryanair amin'ny vidiny ambany. 35 tapitrisa € (41 tapitrisa dolara) ho an'ny tambin-karama sy ny vidiny hafa.
Raha toa ka mikatona amin'ny ady amin'ireo mpitarika ny sendika ny lehiben'ny kaompaniam-pitantanana noho ny karama sy ny fanatsarana ny fepetra asa efa somary “milamina”, ny manam-pahaizana momba ny indostria dia mitady vahaolana vaovao hanafoanana ny fandrahonana mihantona ataon'ireo sendikan'ny mpanamory fiaramanidina mahery vaika indray mandeha. "Iray amin'ireo safidy azo atao - mpanamory mpanolo, izay afaka mahazo famatsiam-bola amin'ny alàlan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka ary avy eo, amin'ny fotoana ilana fanampiana, dia miditra amin'ny fanoloana ireo mpiara-miasa aminy amin'ny fitokonana, mitahiry vola an'arivony tapitrisa dolara ary, indrindra indrindra, manome izay ilain'ny tsia mpandeha sosotra lava kokoa », hoy ny matihanina amin'ny orinasa mpanamory fiaramanidina efa ela, sady filohan'ny Birao ao amin'ny Avia Solutions Group Gediminas Ziemelis.
Sendikan'ny varotra tsy mitongilana - vozon'akanjo fiaramanidina
Amin'izao fotoana izao, mpanamory fiaramanidina marobe miasa ho an'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka no mpikambana ao amin'ny fikambanan'ny mpiasa iraisam-pirenena ihany. Rehefa dinihina tokoa, ny fonosam-bola be dia be dia mamela azy ireo handrakotra mora foana ny saram-pidirana avo lenta izay, avy eo, manome unions vola be ilaina mba hitazonana ny serivisin'ny mpisolovava be karama ary hifampiraharaha amin'ny fifanarahana vita asa tsara indrindra. Vokatr'izany dia maro ireo mpitatitra no voatery manao fifanarahana mandrara azy ireo tsy hanofa ekipa ho an'ny tampon'ny vanin-taona, manangana kaompaniam-pitaterana zanany vavy tsy misy tsodrano avy amin'ny sendika ary mampiasa zon'olombelona hafa ankafizin'ny orinasa miasa amin'ny ankamaroan'ny indostrian'ny orinasa hafa.
“Alao an-tsaina fotsiny raha toa ka misy mpamatsy informatika lehibe manompo ireo toby famokarana angovo nokleary (indostria hafa misy risika be) tokony hanaiky ny fangatahan'ny sendika tsy hanakarama ny mpiasa avy any ivelany, na iharan'ny fiakaran'ny asa tampoka aza. Tsy maintsy manaiky ianao fa tsy misy dikany izany. Saingy na izany aza, amin'ny sidina fiaramanidina dia toa fanao mahazatra… ”hoy i Gediminas Ziemelis.
Mpanamory fiaramanidina - iray amin'ireo matihanina be karama indrindra any Andrefana?
Raha ny filazan'i G. Ziemelis, na dia haingana aza ny sendika manamarina ny fitakian'izy ireo amin'ny alàlan'ny filazany ny ahiahiny momba ny fiarovana ny sidina, raha ny tena izy dia matetika izy ireo no manizingizina ny hahazo izay tadiaviny… satria azon'izy ireo atao. Miorina amin'ny fandinihan'ny ankamaroan'ny manam-pahaizana momba ny indostria, tsy inona izany fa ny herin'ny sendika manankarena miaraka amin'ny tsy fahaizany mamantatra mpanamory fiaramanidina misy ampy izay nahatonga ny asa teo amin'ireo olona be lanja indrindra tamin'ny hemisphere Andrefana. Rehefa dinihina tokoa, raha te-ho lasa mpanamory fiaramanidina dia tsy mila talenta miafina ny olona iray. Ny hany ilainy dia ny fahasalamana matanjaka, ny fandraisana andraikitra, ny fahavononan-kevitra ary ny toetra amam-panahy mamela ny hiatrika toe-javatra mampiady saina amin'ny fanajana ny fomba fanao napetraka. Ny zavatra hafa rehetra dia azo ampianarina mandritra ny fiofanana momba ny fiaramanidina.
Maharitra 21 volana monja ny fahazoana fahazoan-dàlana mpanamory fiaramanidina ho an'ny rehetra nefa tsy misy fiofanana mialoha ary 12-14 volana hafa ny sidina miaraka amin'ny mpampianatra iray mba hanangonana ny isan'ny ora fiadiana ilaina. “Raiso, ohatra, ny mpamily aotobisy. Izy koa dia tompon'andraikitra amin'ny fitaterana soa aman-tsara olona am-polony amin'ny fotoana iray. Na izany aza, ny mpamily fiara fitateram-bahoaka dia tsy mandray karama ny ampahatelon'ny karama fanamoriana. hoy i G. Ziemelis.
Ny sarintany misy ny karaman'ny mpanamory salanisa dia mampiseho banga mazava amin'ny karama manerana ny faritra samihafa. Tsy ilaina intsony ny milaza izany, ny andraikitry ny mpanamory fiaramanidina frantsay na irlandey $ 10000 ($ 12,000) dia ho azon'ny matihanina manana fiofanana ara-bola amin'ny orinasa, ahazoana eo ho eo € 4300 (5000 $) isam-bolana avy any Polonina na Litoania. “Ary miresaka momba ny mpanamory fiaramanidina efa za-draharaha avy amin'ny firenena manana fomban-drazana fiaramanidina lalina sy fotodrafitrasa fanofanana matanjaka izahay. Manidina izy ireo satria manolo-tena amin'ny asany ary tiany fotsiny ilay asa, fa tsy hoe noho ny sendika sasany nahavita nifampiraharaha tombontsoa na tombontsoa roa, "hoy ny fanamarihan'ny mpitantana.
Avia Solutions Group, izay mitantana ny ivon-toerana mpanamory fiaramanidina lehibe indrindra any Eoropa Atsinanana, fiofanana BAA, dia efa nanao fifanarahana tsiambaratelo mialoha miaraka amin'ireo mpitatitra lehibe hanofana isan'ny antsoina hoe mpanamory mpanolo. Vonona handoa ny vidin'ny fiofanana mpanamory fiaramanidina vaovao ireo orinasa ireo mandritra ny taona maro. Aorian'ny fiofanan'izy ireo, ireo mpanamory fiaramanidina ireo dia hahazo ny traikefa voalohany amin'ny sidina ary hanangona ora sidina amin'ny sidina kely kokoa. Avy eo, raha misy ny fitokonan'ny mpanamory fiaramanidina, ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka izay nanakona ny fiofanany tamin'ny voalohany dia afaka miantso ny mpanamory fiaramanidina hameno ny toerana foana mandritra ny fotoana fohy na maharitra. Amin'izany fomba izany dia tsy misy mpanamory fiaramanidina mitarika ny asa aman-draharaha mahazatra ary 350-500 mpanamory mpisolo toerana no afaka mahazo traikefa manidina ho an'ireo goavambe indostrialy. Vahaolana mandresy fotsiny izany.
“Matematika tsotra io. Mba hampiofanana ny mpanamory fiaramanidina soloina voalaza etsy ambony dia tokony handany vola eo ho eo ny kaompaniam-pitaterana iray. 40 ka hatramin'ny 60 tapitrisa € (50 ka hatramin'ny 70 tapitrisa $). Avelao fotsiny aho hampahatsiahy anao fa ny fanelingelenana fandaharam-potoana farany teo dia efa nandany an'i Ryanair mihoatra ny € 35 tapitrisa ($ 41 tapitrisa). Ary iza ao an-tsainy no hametraka ny volany amin'io fotoana tokana nandavan'ny mpanamory fiaramanidina io tao anatin'ny folo taona ho avy? Izaho manokana dia tsy hanao ”, hoy ny filohan'ny Birao ao amin'ny Avia Solutions Group G. Ziemelis.
Araka ny hevitr'i G. Ziemelis, ny ho avy dia an'ny orinasam-panamoriana fiaramanidina toy izany izay tsy matahotra mitady vahaolana mahery setra amin'ny olan'ny sendikà matanjaka loatra. “Raha misy filàna dia hampiofana ny vondron'olona miasa tanteraka ao Litoania izahay (olona manodidina ny 300,000),” hoy ny vazivazy G. Ziemelis.
Aeromexico dia mitatitra ny valin'ny fifamoivoizana tamin'ny septambra 2017
Ny satan'ny ekipa mpitatitra entana an'ny Air Partner dia sidina manerana an'i Karaiba hanohanana ny ezaka fanampiana ny rivodoza